सुशान्तको न्यायको लागि दिदी श्वेताले चलाइन् यस्तो अभियान, चौतर्फी तारिफ….:: Naya Nepal
सुशान्तको न्यायको लागि दिदी श्वेताले चलाइन् यस्तो अभियान, चौतर्फी तारिफ….
एजेन्सी : सुशान्तका दिदी श्वेताले भाई सुशांतलाई न्या’य दिलाउनकोलागी फिड फर एसएसआर नामक एक अभियान नै चलाएकी थिईन् । जस्को माध्यमद्धारा उनले अ’प्ठ्यारोमा परेका मानिसहरुलाई खाना खुवाउनकोलागी अपिल गरेकी थिईन् ।
श्वेताको यो अभियानलाई संसार भरका मानिसहरुले स्वागत यो’ग्य भनेका थिए । र उनको यो अभियानमा जोडिएका पनि छन् । अभियानमा जोडिएका तिनै मानिसहरुलाई श्वेताले सामाजिक सञ्जाल मार्फत धन्यबाद दिएकी छन् ।
सुशान्त सिंह राजपूतको मृ’त्य पश्चात उनकी जेठी दिदी श्वेता सिंह कीर्तिले सामाजिक सञ्जालमा लगातार भाईलाई न्याय दिलाउनकोलागी अभियान चलाई रहेकी छन् । उनले सुशुान्तलाई न्याय दिलाउने देखि लिएर उनको आत्माको शान्तिकोलागी प्रर्थना सभा लगाएत विभिन्न अभियानहरु समाजिक सञ्जालमा नै चलाउँदै आई रहेकी छन् ।
दिदी श्वेता सिंह कीर्तिले भाई सुशान्तलाई न्याय दिलाउनकोलागी हर सम्भव प्रयास गरिरहेकी छन् । सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाटै भएपनि उनले आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिई रहेकी छन् । उनको अभियानको सफलता रियाको गिरफ्तारीलाई मानिएको छ । रिया सुशान्त केसको मुख्य आरोपी हुन् । अहिलेसम्म सुशान्तको ह त् या को विषयमा कुनै एठेष्ट प्रमाण भने जुट्न सकेको छैन ।